Firefox 20 dia hampitombo ny hafainganana rehefa mandefa pejy | Avy amin'ny Linux
Firefox 20 dia hampitombo ny hafainganana rehefa mampiditra pejy
Farany dia nivaly ny vavako. Ao amin'ny andiany 20 an'ny Firefox Ho fanampin'ny fitetezana manokana ny takelaka dia hanana endrika vaovao ao anaty tranokala izahay, izany hoe hampiditra ireo takelaka sy soratra amin'ny endriny aloha, mba hampidirana ireo sary rehefa miditra pejy na tranokala isika.
Tsy vaovao amiko ity, satria toa io endrika io ihany no toa nampihatra ahy Opera, ary izany no antony mahatonga azy io hanao ny navigateur norvezianina ho iray amin'ireo haingam-pandeha indrindra eny an-tsena.
Tiako foana izany Firefox nanao an'io, nitady fanitarana mihitsy aho mba hahatratrarana an'io tanjona io nefa tsy nisy vokany. Araka ny vaovao novakiako tao ity tranonkala ity, Ehsan Akhagi novolavolaina tamin'ny Mozilla nanoratra:
"Tsy fantatro izay toa heuristic-tsika amin'ny laharam-pahamehana, saingy amiko dia tokony hanana laharam-pahamehana ambany kokoa ny sary (farafaharatsiny ireo izay tsy misy fiantraikany amin'ny layout) raha ampitahaina amin'ny takelaka sy soratra mba hahafahantsika ho afaka mahazo zavatra haingana kokoa amin'ny efijery. "
Ary izao ve no tsikaritr'izy ireo? ¬¬
Fitsapana mialoha natao nataon'ny mpamorona ny Mozilla, Patrick McManus, mampiseho valiny azo antoka sasany. Fampiasana ny tranonkala media sosialy malaza Pinterest Ohatra, ny fotoana fiandrasana hahazoana zavatra hiseho eo amin'ny efijery dia nahena hatramin'ny 3,4 segondra ho 1,6 segondra.
loharanom-baovao: Vaovao amin'ny Internet
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Firefox 20 dia hampitombo ny hafainganana rehefa mampiditra pejy
Noheveriko fa efa nanao an'izay ny mpitety rehetra, dia ... lojika io ... Ataovy izay voalohany tsotra indrindra ary farany mavesatra indrindra .__.
Ary ... maninona no ao amin'ny Firefox 20 fa tsy taloha?
Iza no mahalala
Ary mazava ho azy, toy ny "kinova vaovao" an'ny firefox, dia handany fahatsiarovana kely kokoa izany.
Ho avy ny andro hanokafantsika ny firefox ary ho toy ny fampidirina anaty takelaka ondrilahy izany.
Vaovao tsara izany. Efa ela no niandrasako zavatra toy izao. Faly aho fa tonga ihany io. Ny marina dia ny fahatsapana izany. Tsy naharitra ela izany.
Ho ahy i Firefox dia Windows Internet Explorer, farafaharatsiny ao amin'ny solosainako ianao dia tsy afaka mangataka antsasak'adiny toa an'i Chrome ohatra. Tsy maintsy nandao an'i Opera aho satria nanao majika tamin'ny tsoratadidy, nanjavona mihoatra ny antsasany, saingy nety kokoa noho ny Firefox ihany koa.
Azoko fantarina ve hoe inona ny kinova Firefox ampiasainao? Jereo ny mampitaha ny Firefox amin'ny IExplorer .. uff. 😀
HAHAHA, tsara fa efa nampitaiko io, saingy marina fa ratsy lavitra noho Chrome aho. Ary havaoziko, 17.0.1. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana nataoko: ny tiako holazaina dia hoe Internet Explorer an'ny Linux ho ahy, ampiasaiko izy io mba hisintomana ny Chrome sy ny zavatra hafa kely.
Inona marina no tianao holazaina hoe "ny zavatra ratsy kokoa ho anao"?
Eny, tsy dia mifantoka loatra amin'ireo olana ireo aho ary tsy fantatro raha toa ny RAM na ny fanjifana CPU na fantatro, fa mavesatra kokoa noho ny Chrome izany, ohatra rehefa miditra amin'ny tranonkala misy rohy maro aho ary manokatra 3 na 4 amin'ny fipihana + ctrl hanokatra azy ireo any aoriana ary hitsidihana azy ireo miaraka amin'ny Chrome dia tsy manana olana aho fa ny Firefox kosa mampiadana kokoa azy ary imbetsaka aza saika nianjera. Ary raha YouTube izany pejy izany ary izay nosokafako ao aoriana dia horonan-tsary hafa dia efa mihoa-pefy izany.
Fanjifana RAM dia efa nolazaiko anao fa tsia, mandany bebe kokoa i Chrome.
Milaza ianao fa mahatsikaritra mavesatra kokoa azy io, saingy efa nandrefy ny fotoana lanin'ny Firefox hanokafana tabilao ve ianao ary hampitaha azy amin'ny teny mitovy amin'ny Chrome?
Ny Firefox ihany no mameno ny pejy feno rehefa mankany amin'ny kiheba mifanitsy ianao.
Inona no azonao ahantona amin'ny Firefox? Masinina inona no anananao? Mampihomehy satria tsy hitako izay rehetra lazainao ao amin'ny masiniko rehetra.
Miaraka amin'ny fanitsiana kely vitsivitsy ao amin'ny firefox firefox dia mandeha haingana toy ny chromium ary tsy mandany ondrilahy firy. Raha tsy te-hitanjozotra momba ny: config ianao dia misy ny extension extension extension haingana izay manamboatra firefox ho haingana kokoa. Na izany na tsy izany, tsy haiko ny antony mahatonga ny firefox hiasa tsara kokoa amin'ny windows noho ny amin'ny linux.
indrisy fa marina izany, amin'ny windows firefox dia mihalalaka, haingana kokoa. Heveriko fa noho ny fikirakirana ireo bizina (raha ny momba ahy dia misy ny iceweasel ho an'ny debian). Angamba ny fanangonana azy io dia hanatsara azy io, saingy mbola tsy manazava ny antony mahatonga ny binary ho an'ny windows (na ao amin'ny xp na 7) naorina tsara kokoa. Moa ve mifanaraka kokoa amin'ny valan-javamaniry ny browser? vazivazy inona kay?
Ry Rúben malala, mamela ny tenako hifanohitra aminao aho, saingy nihatsara be i Mozilla Firefox teo amin'ny lafiny fahombiazana, efa herintaona teo ho eo no nampiasako ny Archlinux, manana Opera, Chrome, ary ny browser-ko Firefox aho (ireo tombony atolotra azy dia tsy atolotry ny mpitety hafa) Nandritra izay fotoana rehetra izay dia nampiasako ireo mpamily sary Nouveau (nesorin'i Arch ireo mpamily nvidia-173), ary ny fahombiazan'ny Chrome sy Opera (fikirakira takelaka vitsivitsy) dia somary avo kokoa noho ny Firefox, tamin'ity kinova 17.0.1 tsapako ity fanatsarana, ny solosainako dia P4 ka hatramin'ny 3.06 tsy misy HT, 2 GB DDR RAM, ary sary GForce 5200 izay vao andro vitsy lasa izay dia afaka nametraka ireo mpamily nvidia-173xx avy tany AUR (Thanks Natrio), MAHAFINARITRA !!!, ny zava-bita Tena tsara i Firefox, nijery horonan-tsary, pejy feno sary, ary nisokatra ny takelaka maro, shulada! Chrome sy Opera tavela any aoriana. Tsy misy Switch to Firefox.
Eny, inona no tianao holazaiko, te hanaiky anao aho fa tsy toy izany. Mampalahelo fa tsy mandeha tsara amin'ny solosainako izy toy ny amin'ny anao.
mafana fo tafahoatra dia hoy izy:
Hivoaka foana ireo mpankafy Firefox hanohitra ary hilaza fa ny Firefox no fahagagana fahavalony, ahoana no ahatongavanao hilaza fa tsy andriamanitra ety an-tany izy io. Ary satria ny tsy fahombiazan'izy ireo dia miha sarotra ny tsy hahafantarana azy ireo dia tsy afaka mandà azy ireo tanteraka intsony ankehitriny fa kosa izao dia milaza aminao izy ireo fa mety ho marina izany fa ny manandrana ny kinova farany izay nandritra ny fotoana fohy teto dia namboarina io ary nanipy fanatsarana izy izao no mahagaga hoy hatrany izy ireo.
Tsy maintsy mandositra an'io browser io ianao toy ny pesta, io no hitako fa mitondra tena toy ny mpikambana ao amin'ny sekta ny mpampiasa azy, jamba amin'ny lesoka sy adala ary mpandainga izy ireo hampiova finoana olona amin'ny vidiny rehetra.
Mariho fa na dia afaka 9 taona sy 20 aza dia tsy fantany ny fomba fiasan'ny orinasa ary tsy maintsy mijery ny hafa izy ireo mba hahalalany fa miharihary ny fomba fanaovana zavatra.
Izay nandritra ny 8 taona sy kinova 17 (arak'izy ireo dia efa namboarin'izy ireo izany, araka ny filazany azy) izy io dia mpitety tsy dia tsara ary tsy dia voavela ny famaritana ratsy. Fandrao lasa adala ianao, ny tiako holazaina dia hoe navigateur mandrakizay misy fivoahana, fotoana fampidirana mampihoron-koditra ary fianjerana tsy tapaka hanala fahatsiarovana mba hampisehoana fa kely ny laniny; olana izay nolavina hatrany mandra-pahatongan'izy ireo resy. Amin'izao fotoana izao dia nilaza izy ireo fa tsy manana azy intsony fa iza no mahalala raha dingana fandavana vaovao.
Ho an'ny kely indrindra amin'izany, ny mpankafy dia nanameloka an'i IE ho faty mandra-pahafatiny, izay lehibe lavitra noho ny Firefox ankehitriny.
Avy amin'ny haingana indrindra, dia moka ara-bakiteny izy io; ny fanatsarana azy dia tsy inona fa ny plasbo ary sendra izany fanitarana izany dia olon-dratsy mahazatra ny mombamomba azy.
Valiny amin'ireo mpankafy
Ary zavatra hadinoko nolazaina tamin'ny farany, raha mila mandahatra ny Firefox aho ary manamboatra azy ME mba hiasa tsara dia izay ny fiekena farany fa ratsy ny Firefox ary tsy afaka manao vokatra miasa izay ampiasain'ny mpampiasa ny mpamorona azy hanoratra azy.
Soa ihany fa misy safidy maro, izany hoe ny hafa rehetra ankoatry ny Firefox, izay ataon'ny olona mahay fa tsy ataon'ny amateurs pseudo izay toa ny fantany fotsiny dia ny hampiditra indostrialy ireo mpampiasa ary handany vola an-jatony tapitrisa isan-taona.
ANDRIAMANITRA !!! May ny masoko 😀
Miresaka fanatisme sy indoctrination… ary tonga eto ianao hanatontosa ity fampielezan-kevitra fanosoram-potaka mahery setra ity.
Tsy fantatro ireo mpampiasa Firefox hafa, fa tsy mba nandà ny lesin'izy ireo velively aho, vao mainka nanasongadina azy ireo aho mba hahafantarana azy ireo ary namboarina faran'izay haingana.
Ary ankehitriny dia efa mpitety tranonkala mahantra sy namboarina foana izy io, na koa ny milaza fa ambony lavitra noho ny IE ... dia mamaly ny trauma taloha sy ny fankahalana "fotopampianarana" izay mihemotra.
Mpanamboatra tranonkala ve ianao? Tsy i Firefox no fahagagana fahavalo fa ny Chrome kosa tsy mainka Opera mihoatra ny raha miresaka hadisoana isika dia manana # 1.
Browser ratsy? Azafady, IExplorer, Opera, manome ireo tranonkala araka izay tiany izy ireo .Fa i Firefox? Raha nanomboka nandao izy dia izy irery no nanaja ny W3C.
Saingy ny fahitako ny hevitrao (izay milaza fa ambony ny IExplorer) ary avy any Windows ianao, dia tsy nanantena zavatra hafa aho.
Miala tsiny, fa maninona no may ny masonao?
Tsy fantatro koa hoe inona no ifandraisany amin'ny hoe developer web na tsia aho, miahiahy aho fa hamaly lohahevitra iray ianao.
Azafady mba lazao amiko ny lesoka izay lazaiko fa lesoka izay tsikeraiko ary tsy azo lavina velively; mba hanasongadinana fa ny hafa dia # 1 ao anaty tsy fahombiazana ary tsy mampiseho na inona na inona, dia ny hipetraka ary manipy FUD. Manantena aho fa lesoka izy ireo izay mandresy ny tsy fahampiana maharitra sy ny fahalanian'ny Firefox ka izy ireo dia # 1.
Mamelà ahy hanazava, navigateur ratsy izy io satria tsy ampy ny kaody. Mihantona, manaova famoahana, mitaredretra ny ho faty, mihantona indray, tsy lazaina intsony ny tsy fahaizan'ny toetr'andro mandra-pikaozanao ny Chrome sy Opera; ireo toetra mampiavaka ny tantarany iray manontolo nandritra ny kinova 20 sy 9 taona; izy ireo dia zavatra miresaka momba ny rindrambaiko tsy dia vita firy, mihoatra ny hoe MONUMENT an'ny rindrambaiko tsy dia vita firy.
Rehefa hitako fa milaza ianao fa manome ny IE sy ny Opera araka ny fahafinaretany dia tsapako fa ny lohahevitra ihany no fantatrao, misy porofo kendrena ve? Azo antoka fa tsy raharahinao fa voajanahary ny tranokala natao ho an'ny Firefox, miasa tanteraka ao amin'ny Firefox fa tsy amin'ny hafa.
Toy ny Firefox, toa ny ambiny, dia nanaja ny W3C rehefa mety aminy eny ary rehefa tsy mifanaraka aminy tsia, toy ny hafa; Tsy olo-masin'ny W3C izy, na ilay voalohany na ilay manaja azy indrindra, talohan'ny nibodoan'ny IE izany toerana izany.
Ary mamela ahy ianao raha manafintohina anao aho, na dia mety ho ilay nanafintohina aza aho, ny tsipika farany nataonao dia adhoniem iray izay tsy ampy fahaiza-misaina. Ny fampiasana rafitra iray dia tsy mahatonga ahy hahay ny zavatra rehetra avy aminy, farafaharatsiny izay mampiasa Windows dia tsy toy izany, zavatra iray hafa dia ireo mampiasa Linux sy Mac izay hino fa ny mpangalatra rehetra dia mifanaraka amin'ny toe-piainany. . Toy izany koa no azoko lazaina aminao, fa satria Linux ianao, na inona na inona MS dia ho poop, IE hitsentsitra sy "afaka" Firefox dia tsy maintsy arovana amin'ny jihads.
Ny zavatra mahatsikaiky dia ny an'ny Mozilla Windows dia zava-dehibe kokoa noho ny Linux, saingy toa tsy te hanana fahamendrehana ireo banky linux ary tokony hamatsy vola izay mahaloa azy ireo.
Ratsy loatra ny IE manavesatra anao amin'izao fotoana izao dia ambony lavitra noho ny Firefox, IE9 ary tsy lazaina intsony 10. Ny zava-misy fotsiny tsy misy fivoahana, na mihantona, na tsy mahita amin'ny minitra farany ny fomba fanaovana; apetraho ambony.
Sebastian wetzel dia hoy izy:
Raha marina ny lazainao, maninona ny distros linux rehetra no tonga miaraka amina firefox? Sa manantitrantitra ianao fa tsy fantatry ny mpandrindra rindrambaiko lehibe rehetra fa ratsy ny firefox, na fantatrao mihoatra noho ireo mpamorona rehetra ireo? Andriamanitra, mila miala kely amin'ilay soavaly setroka ianao ...
Valiny tamin'i Sebastian Wetzel
Ary mbola tsy nampiasa plugin mihitsy aho hanatsarana izany, vao tamin'ny kinova 4 aho no nanomboka nikitika ny momba ny: config, ary tamin'ny fomba madiodio.
Eo am-piasana dia mampiasa Windows Vista SP 1 aho (tsy manan-tsafidy hafa aho), miaraka amin'ny IE 9, maharitra ela kokoa ny fanombohana toy ny firefox, ary ao amin'ny IE dia manokatra tabilao mihoatra ny 6 aho ary tena famoizam-po ho ahy izany, mila fotoana lava kokoa ireo pejy, ny zava-misy Tsotra momba ny fanovana kiheba. Oh ary mba hametrahana azy dia manery ny tenako hametraka SP1 aho, ary koa ny andiany 10 heveriko fa nanadino ireo razambeny izany. Tadidio fa tsy mila zavatra amiko mihitsy ny Firefox.
Ilay zavatra momba ny masoko nirehitra dia mihomehy. Manontany anao aho raha mpamorona tranonkala ianao satria, raha nisy ianao, ho fantatrao ve ny tombony ananany Firefox ambonin'ny ambiny, ankoatry ny zavatra hafa ho an'ny fitaovany ho an'ity karazana mpampiasa ity.
Inona ny lesoka resahinao? Amin'izao fotoana izao dia mampiasa aho Firefox 17.0.1 Rehefa avy nampiasa ny kinova teo aloha aho ary na ny betas aza ary mbola tsy nianjera tamin'ny browser na zavatra hafa toa izany aho, ary manoratra aminao amin'ny netbook, izay fantatray rehetra fa tsy manana ny fitaovana farany mandroso indrindra. Hatramin'ny andiany 15 ny Firefox dia nihatsara tokoa, saingy be loatra, ka indraindray aho misalasala fa i Chrome dia manana fizarana tsena bebe kokoa, izay ampahatsiahiviko anao ihany koa, Google dia manao fampielezan-kevitra amin'ny marketing na aiza na aiza, tsy izany i Mozilla.
Voamarinao ve ny kaody loharano Firefox ahoana no ilazana fa tsy ampy? Azonao atao ve ny manondro ny tsy fahampiana ao amin'ny kaodinao? Ary rehefa miresaka aho IExplorer y Opera, Tiako holazaina fa tranonkala marobe izay mijery tsara Firefox y Chrome, amin'ireo browser ireo dia tsy mandeha izy ireo. Omeko ohatra tsotra ianao, ampitahao ny fomba fisehon'ny carousel an'ny tranonkala sasany Firefox e IExplorer, ao amin'ireo kinova misy azy.
Jereo raha IExplorer tsara kokoa noho Firefox, fa ireo mpandrindra tranonkala raha tsy mampiasa rafitra toy ny Bootstrap izy ireo dia mila manamboatra takelaka manokana IExplorer Nahavita nampiseho tsara ny tranokala aho, satria mifanohitra amin'izay lazainao (ary tokony hahalala tantara kely amin'ny resaka browser), dia tsy manaja tanteraka ny fenitra W3C izany satria nisisika foana ny hampiasa ny azy manokana.
Ho fampahalalana anao, ampiasaiko Windows amin'ny asako miaraka amin'ny Linux (izay ampiasako ao an-tranoko, ny asako ary na dia ao amin'ny trano fidiovana aza raha ilaina), noho izany, fantatro izay omen'ny tsirairay amin'ireo rafitra fiasa ireo. Azoko lazaina aminao ilay zavatra nolazainao tamiko: Windows mijaly noho ny fianjerana izy, miadana, mandany ondrilahy betsaka loatra, noho izany dia manana kaody ratsy izy. Ary momba izany Mozilla miahy bebe kokoa izy Windows de LinuxMety ho izany, saingy fantatsika rehetra ny antony. Hoy aho, fantatrao, sa tsy izany?
Azafady, fa efa an-taona maro aho no nampiasa Firefox, ary ny marina dia, na dia misy lesoka aza, dia tsy maintsy mijery jery todika be foana aho vao hahatsiaro ny fanantonana farany.
Miadana ho faty ??! Fa inona no resahintsika?
Voalazanao ihany koa fa ny Firefox dia tsy misy endrika raha ampitahaina amin'ny Opera sy Chrome. Tsy fantatro ny hafa, saingy tsy misy zavatra tsy azoko avy amin'ny Opera any Firefox (tsy misy tena ampiasako ny tiako holazaina), ary ao amin'ny Chrome ohatra dia malahelo mpamaky RSS mirindra toa ilay ananan'i Firefox aho, fantatro fa misy extensions ho an'ny Chrome amin'ny tranga toy izany, saingy efa nanamarina aho fa tsy miasa akory izy ireo toa ilay namboarina tao amin'ny Firefox.
Ho an'ny firaketana dia tsy mizara hevitra amin'ireo mpankafy ahy aho, tsy mino aho hoe ratsy ny Firefox, nilaza fotsiny aho fa mety kokoa amiko ny Chrome. Raha ny marina dia hadinoko ny nilaza fa ankoatry ny fampiasako azy io hampidina Chrome dia ampiasaiko ihany koa hijerena ireo lalao ligy amin'ny Direct Red amin'ny faran'ny herinandro, mahatsapa aho fa mety kokoa amiko io noho i Chrome.
Tsy te hifarana toy izao aho. Miala tsiny 😉
Vaovao tsara, tara kokoa ...
Ho an'ny firaketana, na dia miseho aza ny sary famantarana Chrome, Firefox sy Chromium ihany no ampiasaiko 😉
Ao amin'ny Firefox dia mijery tsara kokoa ny pôrnôgrafia ary azo antoka sy tsy mitonona anarana ny fitetezana ireo ranomasina ireo.
Tsy misy manampy intsony.
Hahahaha fandefasana trolling eto ary fandefasana troll eto. Miarahaba anao vady.
Izy io koa dia misy ifandraisany amin'ny fomba nanoratana ny pejy, satria heverina fa apetraka aloha ny takelaka fanoratana sy ny script avy amin'ny mpizara, avy eo mandeha ny pejy ary apetraka eo am-pamaranana ireo takelaka misy soratra sy ny script avy amin'ireo mpizara ivelany. Ka enta-mavesatra izany.
Mbola manantena aho fa hitohy hampihena ny fanjifana harena xD ny firefox
Fitsipika Firefox, andrana amin'ny android.
Eny, efa manana Firefox 20.0 aho ary ny tena marina dia haingana sy diky ity. Google dia maharitra 2 minitra ary misy tranokala hafa maharitra 10 minitra farafahakeliny, ao amin'ny YouTube dia tsy mifanaraka amiko akory izany, noho izany ampiasaiko ny version 19.2 izay ilay kinova teo aloha ary tsy manome an'io olana io.
Azoko ilay kisary fampiasako ny firefox 20.0 rehefa tsy toy izao: S
Rubyrep (famerenana data tsy manimba)
Fanodinana sary batch miaraka amin'ny GIMP